Yangu iPhone Haizobatanidze Kune Wi-Fi. Heino Kugadzirisa! - Iphone
fitbit yangu haina kuzobatanidza
haikwanise kudzima mifananidzo kubva kugalari
ipad yangu yakaremara uye inoti connect to itunes
Yangu iPhone Haizobatanidze kune Wi-Fi. Heino Kugadzirisa!
IPhone yako haizobatanidze neWi-Fi uye hauzive nei. Pamwe komputa yako inosangana, pamwe shamwari yeshamwari yako iPhone inosangana, kana pamwe hapana zvishandiso zvinobatana zvachose. Pamwe yako iPhone inosangana kune yega yega netiweki yeWi-Fi kunze kweiyo imwe chete, kana kuti zvimwe haina kubatana kune chero netiweki zvachose.
Kune akawanda maybes kana zvasvika pakuongorora uye kugadzirisa dambudziko iri, asi ini ndichakubatsira iwe kusvika pasi payo. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone isinga batane neWi-Fi uye batsira iwe kugadzirisa dambudziko , ingave iine yako iPhone kana yako isina waya router.
marongero ekutakura anovandudza iphone 2020
Zvichakadaro, kuThe Genius Bar…
Mutengi anouya oti iPhone yavo haizobatanidze neWi-Fi. Nyanzvi inobvunza mutengi kuti abatanidze neWi-Fi mukati mechitoro, uye kazhinji nguva yacho, inoshanda. Ndiro danho rekutanga kuongorora iyi nyaya, uye mubvunzo wekutanga waunofanira kuzvibvunza:
“IPhone yangu ichabatana here chero Wi-Fi network, kana zviri chete Poshi network yangu iPhone haizobatanidze? '
Kana iwe usina imwe netiweki yeWi-Fi yekushandisa kuyedza yako iPhone, enda kuStarbucks, raibhurari yako yemuno, kana imba yeshamwari yako uye edza kubatanidza kune yavo Wi-Fi. Kana yako iPhone ichibatana, harisi dambudziko rehardware - pane dambudziko pakati pe iPhone yako neisina waya yako router kumba.
Ongorora: Kana yako iPhone isingabatana chero waya dzisina waya, ramba uchienda kuchikamu chechinyorwa chino chinonzi Delete Ese Iwo eWi-Fi Networks Akachengeterwa Pane Eko iPhone Kana izvo zvikasashanda, ramba uchienda kuchikamu chakadaidzwa Kuongorora Zvinyorwa zveHardware . Tarisa uone yangu imwe chinyorwa kana Wi-Fi yakaiswa grey kunze muZvirongwa !
Iyo Yakareruka Gadzirisa
Kana usati watoita, edza kudzima yako iPhone uye Wi-Fi router, uye kuvadzorera kumashure.
Pane yako iPhone, tinya uye ubatise bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima rinoratidzika. Svetera pane chinovhara nemunwe wako uye mirira kuti iPhone yako idzime. Zvinogona kutora masekondi gumi nemashanu kana kupfuura kuti yako iPhone idzime. Tevere, bata bhatani remagetsi kudzamara waona iyo Apple logo inowanikwa pachiratidziri.
Tichashandisa hunyanzvi hwehunyanzvi kudzima yako Wi-Fi router kudzoka uye kudzoka pairi: Dhonza tambo yemagetsi kunze kwemadziro uye ivhare zvakare mukati.
Mushure mekunge router yako yatanga zvekare, edza kubatanidza yako iPhone kuWi-Fi. Kana ikashanda, pakanga paine dambudziko neakavhara-mukati software yako isina waya (dzimwe nguva inonzi firmware). Vashoma vanhu vanonzwisisa mashandiro eWi-Fi mashandiro. Ese maWi-Fi ma routers anoshandisa zvakangofanana Hardware kugadzira materevhizheni, asi software yakavakirwa muWi-Fi ma routers inosiyana zvakanyanya kubva kumuenzaniso kuenda kune modhi
Kungofanana ne iPhone yako uye komputa yako, iyo software yakavakirwa mune yako isina waya router inogona kupunzika. Iyo router ingave ichiri kutepfenyura network yeWi-Fi, asi iyo-yakavakirwa-software haipindure kana mudziyo ukaedza kubatanidza. Kana kumisazve yako isina waya router kunogadzirisa dambudziko, iwe ungashuve kutarisa webhusaiti yemugadziri kuti uone kana software (kana firmware) inogadziridza iripo kune yako router. Software inogadziridza inogona kudzivirira dambudziko kubva kudzoka.
Kana Yako iPhone Ikubatana Kune Wese Wi-Fi Networks, Kunze kweiyo Imwe
Iyi mamiriro anoita kuti zviome kwazvo kuongorora dambudziko, kunyanya muApple Chitoro. Kazhinji, mutengi haakwanise kubereka nyaya nekuti zvinongoitika kumba. Iyo yakanakisa iyo nyanzvi inogona kuita kupa mamwe mazano akajairika, kumisazve mamwe marongero, uye unoshuvira mutengi akanakira rombo rakanaka. Ndinovimba ichi chinyorwa chichava chinobatsira kupfuura icho, nekuti kusiyana neGenius, unogona kuenda nacho kumba newe.
Tisati tanyura zvakadzika, ndinoona zvichibatsira kudzokorora dambudziko: IPhone yako haizobatanidze neWi-Fi nekuti pane dambudziko ne iPhone yako kana yako isina waya router. Zvinetso nePhones zviri nyore kuongorora, saka isu tichatanga ipapo.
Matambudziko nePhones Uye Wi-Fi Networks
iPhones dzinoyeuka ese maWi-Fi network avakambobatana nawo, pamwe ne password yewebsite imwe. Patinodzoka kumba tichibva kubasa, maPhones edu anozvibatanidza otomatiki kuWi-Fi yedu kumba ndokupinda password. Zvirinani ivo vanofanirwa kudaro.
Imwe yemabhenefiti makuru eiyo iPhone, uye chinhu icho mageeks anogara achinyunyuta nezvazvo, ndizvozvo nyore, uye nekudaro inogumira maererano nemushandisi kugona 'kuenda pasi pehood' kuti uongorore nyaya. Kusiyana neMac yako kana PC, yako iPhone haigone kuratidza runyorwa rwemaWi-Fi network ayo akachengetedzwa pamusoro pemakore. Iwe unogona 'kukanganwa' network yeWi-Fi, asi chete kana iwe watove wakabatana nayo.
Shandura Wi-Fi Kubva Uye Kudzoka Pairi
Imwe nhanho inokurumidza kana yako iPhone isiri kubatana neWi-Fi iri kukurumidza kudzima Wi-Fi nekudzokera. Funga nezvazvo sekudzima yako iPhone kure uye kumashure - zvinopa yako iPhone kutanga nyowani uye wechipiri mukana wekuita yakachena kubatana kune Wi-Fi.
Vhura iyo Zvirongwa app uye tora paWi-Fi. Wobva wadzvanya switch padivi peWi-Fi kumusoro kwemenyu. Mira masekondi mashoma, wobva wadzosera W-Fi kumashure!
Delete Ese Iwo eWi-Fi Networks Akachengetwa Pane Yako iPhone
Tevere, edza kuseta patsva yako iPhone dhatabhesi yeWi-Fi network. Izvi zvinogadzirisa nyaya iyi yakawanda nguva, uye zvese asi zvinobvisa mukana wekuti software inoburitsa pane yako iPhone iri kukonzera dambudziko. Enda ku Zvirongwa -> General -> Seta zvakare uye sarudza Dzorerazve Network Zvirongwa .
Iwe unofanirwa kubatanidzazve kune ako ese maWi-Fi network uye nekuisa mapassword avo zvakare, saka ita shuwa kuti iwe unoziva akakosha iwo usati watanga. Edza kubatanidza kune yako isina waya router mushure mekunge yako iPhone itangazve. Kana zvakadaro zvikaramba kubatana, inguva yeku tarisa kune yako isina waya router . Ini ndinokuratidza maitiro ekugadzirisa pane iyo peji rinotevera yechinyorwa chino.